Cisco သည်ဖုန်းများအတွက်အပေါ်ကွန်ယက် programmer အကောင်အထည်ဖော်ရန် | ၎င်းတို့အားသင်တန်း
15 မာ 2017
Cisco: ဒေတာကွန်ရက် span နှင့်အချက်အလက်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးအလေးပေးဒါကြောင့်လည်းအပြောင်းအလဲများကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့သူအင်ဂျင်နီယာများပေါ်တွင်အလေးချိန်ပါဘူး။ မြောက်မြားစွာအသင်းအဖွဲ့များရာပေါင်းများစွာနဲ့ Networking gadgets ပင်ကြီးမားသောအရေအတွက်ကိုရှိသည်။ အသီးအသီး, အချိန်မှာတဦးတည်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်, Computerized နှင့်အတူပြည့်စုံစေနိုင်သည်ဘယ်မည်သောအကောင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်းကျပ်မတတ်နိုင်သောနှင့်ယူနေတဲ့သေဆုံးသူဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်တစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်သူများအတွက် Cisco ကဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် ယခင်တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားနေ gadget ကမေးရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အရာဖြစ်ပါသည် "ဆိုပေးထားယခုအချိန်တွင်တဦးတည်း gadget ကကြီးကြပ်သောသုို့ခေါ် line interface (CLI), မဆိုကြီးမားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက်အဖွဲ့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အထိရောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းစိတ်ကူးရှိပါသလား?"
မည်သည့်အင်ဂျင်နီယာဤမေးခွန်းကိုဖို့ "ဟုတ်ကဲ့" ဟုမြဲမြံစွာပေးရန်အဘို့အဒါဟာခက်ခဲတယ်။
အနည်းငယ်အပြောင်းအလဲနဲ့ gadgets နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အကောင်းဆုံးအစားထိုးကွန်ယက်ကိုဒီဇိုင်းအပြောင်းအလဲများကို robotize နိုင်စွမ်းပါဝင်ရပါမည်။ Cisco ကအောင်နှင့်စီးပွားရေး Computerized များအတွက်ကွန်ယက် programmer အပေါ်ဦးတည်ပြီးနောက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းတဲ့ Network မှစီမံခန့်ခွဲမှုပရိုတိုကော (SNMP) အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရှည်များအတွက်ကွန်ယက်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းကျယ်ပြန့်အသုံးချခဲ့သည်။ ဒါဟာကနဦးနှောင်းပိုင်း 1980s အတွက်စိတ်ကူးနှင့် SNMP ပြည့်စုံကွန်ယက်ကို programmer တစ်ဦး bearing မရှိခဲ့ဘူးခဲ့သည်။
Google ကဥပမာ, ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ဟာသူတို့ရဲ့ကွန်ရက် gadgets များအတွက်စောင့်ကြည့်ဘို့ SNMP နှင့်အတူ dispense လိမ့်မယ်ကြေငြာခဲ့သည်။
Cisco သည်အတွက် Network က programmer ကဤစက်မှုလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်စည်းဝေးကြီးများနှင့်အတူအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါတယ်:
ကျန်ကြွင်းသော Interface: တစ်ရိုးအသိမှာတော့ကိုယ်စားပြုပြည်နယ်လွှတ်တော်လွှဲပြောင်း (REST) ​​site တစ်ခုနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့အခြေခံက web အစီအစဉ်များအတွက်စံပါပဲ။ Cisco ကကွန်ယက် programmer များအတွက်မြောက်မြားစွာ switches များနဲ့ switches ငြိမ်ဝပ် interfaces ဖွင့်လှစ်ခြင်း, ထို့ပြင်လျှောက်လွှာဗဟိုပြုအခြေခံအဆောက်အအုံ (ACI) တွင်ခဲ့သည်။
Python ကို: ဤသည်အခမဲ့ပရိုဂရမ်စကားအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရှည်များအတွက် Linux ကိုလူတွေအုပ်စုတွင်အထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်ပျံ့နှံ့အတွက်တီထွင်ခဲ့သည်။ Cisco သည်ယခု NX-OS ကိုလုပ်ဆောင်နေမူဘောင်, ACI နှင့်အခြား Cisco သည်အဆင့်ဆင့်သို့ Python နှင့်များ၏ဘာသာပြန်ထားသော scripting နည်းစကားညှိနှိုင်းခဲ့သည်။
ဒေတာများ & Models: တစ်ဦးက data တွေကိုမော်ဒယ် data တွေကိုအခြားဒေတာနှင့်မည်သို့အားလုံး data တွေကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ပယ်ရှားနေသည်နှင့်အတူသတ်မှတ်ဘယ်လိုလက္ခဏာမှတစ်ဦးစံချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးကွန်ရက် gadgets ၏အစီအမံများ၏ သာ. ကွီးမွတျစိတျအပိုငျးကြီးမားတဲ့ data တွေကိုပြပွဲများတွင်ဖို့ပြောပြီနိုင်ပါသည်။ ဒေတာကိုမော်ဒယ်များထို့နောက်ကွန်ယက် programmer နှင့်အတူ mechanized နိုင်ပါသည်။ Cisco သည် ACI အတွင်းရှိ data တွေကို display ကိုအဖြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်သစ်ပင် (MIT) အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။ နောက်ထပ်မြင့်တက်ဒေတာကြောင့် Cisco ကခလုတ်နဲ့ switches နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်သရုပ်ပြဟာ Yang ပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ Yang SNMP များ၏ချို့ယွင်းချက်အောငျနိုငျဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်စံနှုန်းဖြစ်သော "သို့သျောလညျးနောက်ထပ် Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ" ဟူသောအသုံးအနှုနျးကနေဒေတာတွေကိုပြသသည်။
အလှည့်စီတဦးတည်းကွန်ယက်ကို gadgets ပြောင်းလဲမှုများအောင်၏အဆတစ်ခုအဆုံးမှာရောက်ရှိလာကြသည်။ mechanize ဖို့လက်လှမ်းမြောက်မြားစွာ Cisco က gadgets အနည်းငယ်အစီအ interfaces လက်ရှိတွင်ရှိပါတယ်။ ကမဆိုကွန်ယက်ကိုစက်ရုပ် program တစ်ခုနောက်ခံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖက်စပ်လိုအပ်ပါတယ်နေစဉ်ကတစျခုလုံးကိုဖွင့်ပြီးနောက်, အထင်ကြီးအချိန်နှင့်အလုပ်လုပ်ကုန်ကျစရိတ်နှမြောနိုင်ပါသည်။
CCNP လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးသင်တန်းအမှတ်စဥ် - အပြီးအစီးလမ်းညွှန်